Teny na fehezanteny lehibe momba ny fandaharana | Martech Zone
Zoma Janoary 26, 2007 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Miara-miasa amin'ireo mpandahatra programa sasany miavaka aho, matetika dia mahita fivoriana miaraka amin'ireo arsitekto, mpitarika ary mpamorona izay (heveriko) fa tia manipy teny na andianteny lehibe any ivelany hanandrana sy hampatahotra ny heck an'ny Product Manager na ny mpanjifany.
Iray amin'ireo zavatra tian'ireo programmer atao. Ity misy folo amin'izy ireo miaraka amina famaritana tena tsotra (izay tsy isalasalana fa hisarika ny hatezeran'ireo mpamorona hatraiza hatraiza rehefa mamono ny terminolozy azy ireo ho faty aho. sariko fanoharana amin'ny fiara tsotra):
Abstraction - mandray dingana na fiasa sarotra izy ity ary manapotika azy amin'ny lojika… na amin'ny ambaratongam-pahefana (an'ny A, an'i B ny an'i C, sns.) Na amin'ny endrika na asa (loko, habe, lanjany sns). Ny abstraction dia manamora ny fandefasana programa mifantoka amin'ny zavatra amin'ny alàlan'ny fandaminana ny lozisialy lojika. Mba hanamboarana ny fiarako dia manamboatra frame sy motera ary vatana iray aho.
Fialan-tsasatra - Midika izany fa misy kaody taloha ao amin'ny rafitra mety mijanona fa mila esorina. Rehefa tsy ampiasaina intsony ny kaody dia tsy miresaka momba ilay kaody na mampiasa kaody vaovao ireo mpandrindra raha tsy efa lasa amin'ny taloha ny referansa rehetra, amin'izay fotoana izay dia tokony hesorina izany. Indraindray, raha endri-javatra tsy mandeha io dia azonao atao ny mitazona azy mandritra ny fotoana fohy miaraka amin'ny fampitandremana ireo mpampiasa anao fa hiala io. Mahazo rafitra stereo vaovao miaraka amin'ny tariby vaovao aho fa avelako ny tariby taloha ary tsy ampiasaiko.
Encapsulation - Ity ny fizotry ny fandaminana ny asan'ny programa ao anatin'ny ray aman-dreny rehefa tsy tonga manerana ireo faritra hafa ao amin'ilay rafitra ny fiasa. Raha manana anjara asa an-tapitrisany ianao dia tianao ny handaminana azy ireo sy hiasa ao anatin'ny faritra iasan'izy ireo fa tsy hanana azy ireo manerantany. Napetrako tao amin'ny fitoeran'ny motera ny mekanikan'ny mpanohana ny motera… Tsy apetrako ao amin'ny seza any aoriana ny sivana menaka.
lova - ity no fahaizana mandray ny fananan'ny kaody hafa iraisana (kilasy) hahafahana mampiasa azy io amin'ny fampiasa vaovao nefa tsy mila manoratra azy io intsony. Ny lova dia fomba fanao fampandrosoana miorina amin'ny zavatra tsara. Ny fipetrahan'ny fiarako dia azo entina mitondra zaza na olon-dehibe - na iza na iza mipetraka ao.
dalàna - ity no fomba fandaminana angona fahombiazana bebe kokoa ao anaty tahiry iray amin'ny alàlan'ny fananganana referansy. Ohatra iray amin'izany raha tsy maintsy manoratra jiro fifamoivoizana mandritra ny andro aho… mena, mavo ary maitso. Raha tokony soratana amin'ny mena, mavo ary maintso ny firaketana tsirairay - manoratra 1, 2, ary 3 aho ary avy eo manaova latabatra iray hafa izay 1 = mena, 2 = mavo ary 3 = maintso. Ity fomba ity dia tsy mirakitra mena sy mavo ary maintso indray mandeha aho. Ny vavahadin'ny fiarako tsirairay dia mitovy ny tantanan'ny varavarana. Tanana iray, ampiasaina amin'ny toerana 4 samy hafa fa tsy 4 samy hafa.
Object oriented - amin'ny fiteny maoderina fandaharana, ity dia fomba famolavolana iray ahafahanao manoratra kaody manokana amin'ny sombin-javatra, amin'ny alàlan'ny fampiasa ary avy eo ampiasaina indray. Ohatra iray raha te hijery ny adiresy mailaka namboarina aho. Azoko atao ny manangana ny fiasa indray mandeha, ary avy eo mampiasa azy amin'izay ilako azy amin'ny fampiharana. Ny fiarako dia manana 18 ″ rim izay azo ampiasaina amin'ny fiara hafa amin'ny alàlan'ny mpamokatra iray ihany na hafa.
Polymorphism - Sarotra ny manazava ity iray ity, saingy amin'ny ankapobeny dia ny fahaizana mamorona kaody izay azo ampiasaina mavitrika amin'ny toe-javatra hafa. Raha atao teny hafa, dia afaka mandova fiasa tsy manam-paharoa sy mavitrika amin'ny alàlan'ny fomba fanondroana azy fotsiny izy io. Ity dia fitaovana iray mahomby amin'ny fampandrosoana. Azoko ampiasaina ny toeram-pivoahan'ny herinaretako mba hividianana finday na hamatsy ranom-boankazo ho an'ny paompy.
Recursion - ity dia fomba iray izay manondro ny kaody. Indraindray, mahomby sy fanahy iniana izy io, fa amin'ny fotoana hafa dia mety hampandeha ny fametahana ireo fampiharana tsy voafehinao izany. Tsindrio ilay hoe mitady ny stereo ny fiarako ary mivezivezy amin'ireo radio. Tsy vita mihitsy, fa mandeha foana.
refactoring - ity ny fizotry ny famerenana kaody fanoratana mba hahamora ny fanarahana azy na handaminana azy tsara kokoa fa tsy voatery hanisy fampiasa fanampiny. Manamboatra ny maoterako aho.
Architecture Orientin'ny mpizara (SOA) - raiso ny fandaharam-pianarana mifantoka amin'ny zavatra ary ampiharo amin'ny rafitra lehibe ahafahanao manana rafitra iray manontolo izay manao asa sasany. Mety manana rafitra fitantanana fifandraisana amin'ny mpanjifa ianao izay miresaka amin'ny rafitra ecommerce miresaka amin'ny rafitra fandefasana entana, sns. Misintona tranofiara miaraka amin'ny fiarako aho handefasana entana avy amin'ny toerana iray mankany amin'ny toerana hafa. Mampiasa tranokala fanerena (XML) aho hampifandray azy ireo.
Tsapako fa ireo fanoharana dia tsy dia lasibatra foana tamin'ny tanjona kendrena. Manantena aho fa nanampy kely izy ireo, na izany aza!
Torohevitra vitsivitsy rehefa maheno ireto teny ireto ianao amin'ny fihaonanao manaraka miaraka amin'ny mpamorona iray… aza mihazakazaka miverina any amin'ny sezanao ianao ary mijery azy ireo Wikipedia, hijery izy ireo. Aza miketrika fa hanafika izy ireo. Ity ny zavatra tokony hatao… misaintsaina eo am-baravarankely toy ny hoe misaintsaina lalina ianao avy eo ary miherika mijery ny famotopotorana na mamoritra ny saokanao. Andraso izy ireo hanaraka ny fanambarany amin'ny fampahalalana bebe kokoa.
… Mijery izy ireo.
Jan 27, 2007 ao amin'ny 1: 05 AM
LOL tena nofantsihinao io Doug 🙂 Miezaka ny hametraka anay amin'ny asa aman-draharaha ve ianao? Fantatrao tsara fa mifantoka amin'ireny foto-kevitra tsy takatra ireny izahay ary noho izany dia mandeha amin'ny mpanjifa izahay. Ankehitriny tsy maintsy mitady fomba hanapahana azy ireo lavitra isika fanakambanana ireo buzzwords ireo hamoronana andian-teny goavambe izay mety hitovy izao:
Fantatrao fa ny fiasa izay ezahinao hapetraka dia azo esorina amin'ny zavatra marobe izay mametaka ny fampiasa ary mifampiresaka amin'ny alàlan'ny arisivitr'orinasa mifantoka amin'ny serivisy.
Jan 27, 2007 ao amin'ny 9: 57 AM
Misaotra, AL! Mamiratra ny teny notsongainao.
Jan 27, 2007 ao amin'ny 10: 07 AM
Misaotra. Manantena aho fa nividy azy!
Jan 27, 2007 ao amin'ny 11: 00 AM
Mijery eo am-baravarankely misaintsaina azy aho. 🙂
27 Jan 2007 amin'ny 2:58 PM
Amin'ny maha-mpamorona lozisialy ahy dia tiako ny mankasitraka ity lahatsoratra ity. Tsy ratsy daholo akory isika 😉 na oviana na oviana aho dia tsy hanafy olona miaraka amina teknika toy izany 🙂
Avelao aho hanandrana ary hieritreritra teny vitsivitsy hafa ho anao….
27 Jan 2007 amin'ny 3:24 PM
Miarahaba tsara daholo, Dean! Misaotra nijanona! 🙂